Nhau Factory - China Nhau Vagadziri & Vanotengesa
Hunhu Kuongorora Mwero wemarambi nemarambi
Mwenje nemarambi mukuwedzera kune yakakosha basa rekuvhenekesa, zvinonyanya kukosha ndezvekuti chakakodzera chikafu chandelier inogona kuve yakanaka kwazvo foil yemhuri inodziya mamiriro, yakapfava runako uye yakajeka chandelier inogona zvakare kuita kuti vanhu vavhure mweya wakasununguka, kuti hupenyu hwazere kukwidza pfungwa. Sei t ...
Gadzira zvinotumirwa neTumira kuAmazon
【QC ruzivo】 Garment Quality kuongororwa
AQL ipfupikidzo yeAvhareji Level Huri, iri hwaro hwekuongorora kwete muyero. Hwaro hwekutarisirwa: batch saizi, chiyero chekuongorora, saizi yemuenzaniso, AQL inokanganisa yekugamuchira chikamu. Zvekutaridzwa kwemhando yezvipfeko, isu kazhinji zvinoenderana nehuwandu hwekuongororwa uwandu, uye urema ...
Tarisa nzvimbo dzekunze fenicha yemhando yekutarisa
Tsanangudzo yakazara yeCCIC yekuongorora maitiro
General Ongororo Yekuongorora Matoyi
na admin on 20-07-21
Kuongorora zvemhando dzematoyi chinhu chakanyanya kuongororwa chinhu, uye kune akawanda marudzi emathoys evana, akadai sepurasitiki matoyi, plush matoyi, zvemagetsi zvigadzirwa, etc. Chikanganiso chidiki zvimwe chinogona kukuvadza vana zvakanyanya, saka semuongorori, tinofanira dzora kunaka kwezvinhu zvakagadzirwa. Chinyorwa ichi ...
【Ruzivo rweQC】 Vakadzi Vanodzosera kumashure Ongorora
na admin on 20-06-16
Chii chinonzi RoHS?
na admin pa 19-10-25
RoHS Kutevedzana (RoHS) seti yemitemo yeEU inoshandisa EU Directive 2002/95 iyo inorambidza kushandiswa kwezvinhu zvine ngozi mumagetsi nemagetsi zvigadzirwa. Izvi zvinorairwa zvinorambidzwa kuisa pamusika weEU, chero chigadzirwa chine magetsi / chinhu chemagetsi chine zvinopfuura ...